Romney oo Magacaabay Madaxweyne-kuxigeenkiisa
Musharaxa madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga, Mitt Romney ayaa ku dhawaaqay qofkii u noqon lahaa madaxweyne kuxigeenka, haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Maraykanka ee bisha November 2012.
Romney ayaa sheegay Sabtida maanta ah inuu madaxweyne kuxigeen u doortay Paul Ryan oo ka tirsan aqalka hoose ee Maraykanka isagoo matalaya gobolka dhinaca waqooyi ku yaalla ee Wisconsin.
Romney iyo Ryan ayaa ka soo muuqanaya isu-soo bax ka dhacaya maanta magaalada Norfolk ee gobolka Virgnia, si ay u bilaabaan afar cisho oo socdaallo baabuur bus ah ku marayaan gobollo ka tirsan Maraykanka.
Paul Ryan waa 42 jir, wuxuuna haystaa taageerrada kooxaha muxaafadka. Ryan waa guddoomiyaha guddiga miisaaniyada aqalka congresska, wuxuuna ahaa hoggaamiye u ololeeya dhimista is-dhinka miisaaniyadda, isagoo soo jeediya in la yareeyo miisaaniyadda Maraykanka.
Falanqayn la xiriirta xulashada Mitt Romney halkan hoose ka dhagayso.
Xulashada Mitt Romney